Siyaasi Muniir Axmed Cigaal Oo Taageerayaasha Waddani Ee Gobolada Dalka Uga Mahadceliyey Sidii Balaadhnayd Ee Ay U Ololeeyeen, Kulmiyena Ugu Baaqay Inuu Joojiyo Hadalada Xanafta Leh - somalilandlivemedia
Siyaasi Muniir Axmed Cigaal Oo Taageerayaasha Waddani Ee Gobolada Dalka Uga Mahadceliyey Sidii Balaadhnayd Ee Ay U Ololeeyeen, Kulmiyena Ugu Baaqay Inuu Joojiyo Hadalada Xanafta Leh
9:44 28. October 2017
“Kulmiye Hadaladan Uu Qaybinayo Ee Xanafta Leh Ha Iska Daayo Oo Ha Ku Ololeeyo Barnaamijkiisa, Kolay Wuu Arkaa Shacabka Taageeradiisee Yaanu Ku Xoqanin Meel Kale Markii Uu Taageeradiisii Waayey” Kaaliyaha Warbaahinta Ee Xisbiga Waddani
Burco, () – Siyaasi Muniir Axmed Cigaal, kaaliyaha Warbaahinta ee Musharaxa xisbiga Waddani ayaa uga mahad-celiyey Taageerayaasha Xisbiga Waddani ee gobolada dalka gaar ahaan Burco sidii balaadhnayd ee ay isugu soo baxeen fagaaraha khayriyada Ee Burco, waxaanu ku bogaadiyey sidii anshaxa lahayd ee ay u ololeeyeen taageerayaasha xisbigu.
Siyaasi Muniir Axmed Cigaal waxa uu sidaasi ku sheegay mar uu maanta warbaahinta ugu waramayey magaalada Burco, waxaanu ugu baaqay xisbiga Kulmiye inuu joojiyo hadalada xanafta leh ee uu bulshada soo dhex dhigayo oo uu ku ololeeyo barnaamijka xisbigiisa.
Siyaasi Muniir Axmed Cigaal isagoo arimahaasi ka hadlayaaana waxa uu yidhi “Anigoo ku hadlaya Afka xisbiga Waddani, gaar ahaan weftiga xisbiga ee ku sugan gobolka Togdheer magaaladiisa Burco, waxaanu idin leenahay mahadsanidin waxaanu idin leenahay noqon mayno kuwo idin ilooba, insha allaahu waynu guulaysanaynaaye waxa aanu noqon doonaa kuwo xasuustiinu guusha ka dib ay maskaxdooda ku jirto oo wixii ay idiin balanqaadeen fuliya. Wixii aanu soo bandhigay ee mucahadada iyo buuga xisbiga Waddani ee balanka iyo heshiiska aad nagula gasheen ee ahaa siyaasadda buuga xisbiga Waddani ayaad nagula xisaabtami doontaan, waanu idinku dhex joogi doonaa nama waayi doontaan, markaa waxaanu idin leenahay waad mahadsan tihiin, dhamaan shacabkii gobolada dalka sida balaadhan uga ololeeyey.
Burco shalay way hadashay, Burco shalay waxay ku hadashay midnimo, waxay Burco ku hadashay inay rabto Somaliland qurux badan oo aan la kala qoqobin oo aan la kala qolaynin oo gacmaha is-haysata.
Waxaad arkayseen oo aanu lugaynay in ka badan shan kiiloomitir ah ee wadada gashay garoonka kubadda cagta ee baarsiigo dhinaca ka marta, khalqigii halkaa marayey iyo dhamaan wadooyinkii kale shacabkii marayey iyo sidii magaaladu ololahaasi ay u wada-gashay ee ay usoo baxday waxay noqotay wax dhamaan shucuurta Somaliland oo dhan wax ka badasha, taasaa mutaysatay in anaguna aanu ka mahadcelino.
Fariinta aan halkan ka dirayaana waxa weeyi waxaanu leenahay guud ahaan shacabka reer Togdheer iyo Burcoba waxaanu idin faraynaa gaar ahaan taageerayaasha xisbgia Waddani inaad nabadgalyada ilaalisaan Ciidamada Bileyska aad la shaqaysaan.” Ayuu yidhi Siyaasi Muniir Axmed Cigaal waxaanu intaasi ku daray “Waa nasiibdaro in xisbigii Kulmiye markii uu boqolkiiba labaatan wax ka badan uu Burco ka waayey oo markii horena ahayd meelihii uu beenta ka sheegi jiray inuu abaabulo dhalinyaro fawdo sameeya oo qas-sameeya si isku dhac u yimaado. Xisbigaasi waxaa uu abaabulayaa cod ku heli maayo, naca iyo fawdada iyo xumaanta cod laguma helo.
Waxa kale oo iyaduna nasiibdaro ah in laamihii dawlada u joogay marka laga reebo Ciidamada Bileyska oo aan amaanayo inta itaalkooda ah, in gudoomiyihii gobolka Togdheer oo ku dhex milmay xisbiga Kulmiye iyo haday tahay maamulka degmadaba waxaan usoo jeedinayaa inay kala shaqeeyaan nabadgalyada ciidamada Bileyska.
Taageerayaasha xisbiga Waddanina waxaan leeyahay u Adkaysta kadeedka Kulmiye wuu tagayaaye, idinku nabadgalyada ilaaliya, u dulqaata, gawaadhi tiro badan ayaa la jajabiyeye waxaanu idin leenahay u samra guushii ayaa dhaw’e, waa rafadkii uu Kulmiye rafanayee u adkaysta, nabadgalyada aynu ciidamada Bileyska kala shaqayno, Dhamaan taageerayaasha xisbiga Waddani gobol kasta oo ay joogaan taasay faran yihiin.” Ayuu yidhi Siyaasi Muniir Axmed Cigaal.
Gabagabadiina mar uu Siyaasi Muniir Axmed Cigaal ka hadlayey ujeedada Somaliland ay doorashada u galayso ayaa waxa uu yidhi “Doorasho wanaagsan inay somaliland ka dhacdo ayaa qof walba u dan ah, waxaynu doorashada u galaynaa maaha qof qof ku badal maaha laakiin waxaynu u galaynaa waxa weeyi in nolol wacan, mustaqbal wanaagasan iyo hogaamin sax ah in dalkeenu uu helo. Ta Kulmiye uu wadaana taa maaha, waxaanu leenahay oo aanu ugu baaqaynaa Kulmiye waar amaankana aynu ka wada-shaqayno. Hadalada xanafta lehna aynu iska dayno oo Kulmiye hadaladan uu qaybinayo ha iska daayo oo ha ku ololeeyo barnaamij sax ah. Kolay wuu arkaa shacabka taageeradiisee yaanu ku xoqanin meel kale markii uu taageeradiisii waayey ha ka daayo umadda ayaan leeyahay.” Ayuu yidhi Siyaasi Muniir Axmed Cigaal.
Hogamiyaha Xisbiga WADDANI Oo Soo Dhaweyn Dhul-gariir Ah Loogu Sameeyey Deegaano Ka Tirsan Gobolka Togdheer Video
Deeq Raashin Ah La Gaadhsiiyey Dadka Abaartu Saamaysay Ee Degaanka Buuhoodle
Qarax lagu Hoobtay oo ka Dhacay Muqdisho + Tiradda Dhimashadda Iyo Dhaawaca
Muqaal Xasaasi Ah:-4 Askari Oo Ka Tirsan Ciidanka Qaranka Oo Buuhoodle Lagu Diley Iyo Gashaanle Sare Abokor Sulub Oo Eedaymo Ku Miisay Wasiir Fartoon + Sirta Uu Qarxiyey Video
Garabka Baashe Ee Golaha Wakiilada Oo Shaaciyey Magac-yada Xildhibaanada U Tartamaya Ku-xigeenka Baashe Video
Newer PostBurco: Xisbiga Waddani Oo Munaasibad Soo Dhaweyn Ah U Sameeyey Aqoonyahan, Xildhibaano Iyo Siyaasiyiin Ka Soo Jeeda Togdheer Oo Ku Soo Biiray Xisbiga Waddani
Older Post Mujaahid-nimo Somaliland Shirkii Burco Ee 1991 Ayey Ku Bedelatay Muwaadin-nimo. W/Q: Xasan Mataan Faarax Gudoomiyaha Waddani Germany